Interrailing Talooyin Waayo Socdaalka Europe On Miisaaniyadda A | Save A tareenka
Home > safarka Europe > Interrailing Talooyin Waayo Socdaalka Europe On Miisaaniyadda A
Waqtiga Akhriska: 3 daqiiqo(Last Updated On: 17/10/2020)
Interrailing talooyin ku socday miisaaniyad suurto gal ah haddii aad si taxadar leh loo qorsheeyo guura. qiimaha tigidhada tareenka, hoyga, cuntada iyo madadaalada ha kala duwan yihiin oo u dhexeeya dalalka Yurub, laakiin waxaa jira siyaabo badan oo ku raaxaysan a safar-jaban. Nasiib wanaag, diyaarinta qaar ka mid ah, safarka tareenka ee Europe Khasab ma aha in kharash ku dhow sida ugu badan ee aad u malaynayso in! Si aad u caawiso aad qorshaynayso safar ugu fiican Yurub, waanu soo wada gelin anfacaya hanuuniyo interrailing talooyin - Sida loo interrail Yurub on miisaaniyad.
Interrailing talooyin No. 1 – Qorsheyso wadada aad iyo isbarbar dhig qiimaha tareenka
Hubi in ay qorsheeyaan aad Yurub faahfaahin interrailing iyo inay is barbar dhigaan qarashka kala duwan tikidhada tareenka. Kaydinta lacagtu waa qayb muhiim ah oo ka mid ah talooyinkayaga Interrailing iyo inaad sidaa sameysid waa inaad u safreysaa meel ka baxsan xilliga sare. Ku socda maalintii ugu jaban ee toddobaadka aad. Waxaad naftaada ka badbaadin doonaa lacag aad u badan oo yaddeena duqsiyada safra. Tani waxay awood kuu siin doontaa inaad u safarto qayb yar oo ka mid ah wixii caadi ahaan ku kici lahaa inta lagu jiro xilliyada ugu sarreysa. Isbarbar dhig kharashaadka ku baxa degelkeenna oo bilow qorshaynta iyo qiimeynta kanaga safarka tareenka.
Save on hoy by qaadashada tareen habeenkii
On Yurub kasta safarka tareenka u quudhin, mid ka mid ah kharashka ugu weyn waa hoyga. Doorashada halkaas oo uu u seexdo habeenkii oo aad u badan waxay ku xiran tahay miisaaniyadda iyo nooca waayo-aragnimo aad raadinayso. tareenada Night are a good option for isticmaalaan lacag ka yar on hoy. Ma jirto lacag dheeraad ah oo ay ku socdaalaan tareenka habeen iyo sidoo kale aad loo kordhiyo doontaa waqti aad by u safraya inta aad hurdeyso. Haddii aad u safrayso ka Milan si Paris ama Venice Paris ee Tareenadu Thello waa hab wax ku ool ah oo raaxo leh in ay gaaraan aad caga. Traveling on a night train is one of the great interrailing tips as it is a fantastic way to stretch your budget inta aad safarka!
Milan in ay Tareenadu Paris
Ka faa'iidayso jiidashada magaalada free
Magaalooyinka qaar ka mid ah, waxaad booqan kartaa noocyo kala duwan oo matxafyo iyo soo jiidashada for free. London ayaa gaar ah kala duwan oo ka mid ah matxafyada iyo soo jiidashada in ay booqdaan, si buuxda oo lacag la'aan ah. Magaalooyinka Yurub, sida Copenhagen, lacag la'aan lagu galo madxafyada waxaa la bixiyaa toddobaadkii hal mar. Berlin waa cajiib oo uu leeyahay safar socodka oo lacag la'aan ah oo dhan soo jiidashada ugu weyn ee magaalada.
Dad badan oo magaalooyinka kale sida Amsterdam have an annual night where all museums open their doors to the public for free. Your miisaaniyadda ma u leeyihiin in ay noqon weyn si ay u sahamiyaan magaalooyinkaas cajiib ah. Hubi in aad qaadato Faa'iidada oo dhan, kuwaas oo lacag la'aan ah cajiib ah soo jiidashada.
Amsterdam si Tareenadu Berlin
Cun halkaas oo dadka deegaanka u sameeyaan – Interrailing tips
magaalooyinka Yurub waxay noqon kartaa qaali cunin, gaar ahaan marka aad ku jirto miisaaniyad dhagan. Isku day inaad ka fogaato cuntada maqaayadaha ku yaal meelaha ugu muhiimsan ee dalxiiska. Kuwani waa makhaayadaha wixii qaali ah oo inta badan tayada cuntada ka yar tahay meelaha dheeraad ah soo baxay. Isku day inaad ku socotaan ka mid ah meelaha ugu muhiimsan ee dalxiiska iyo ka mid ah cunaan deegaanka waayo, cuntada delicious in uu yahay qiimaha badh.
Fikirka of interrailing Europe? Isticmaal talooyin our Interrailing iyo Tag Save Tareen A online si aad u hubiso soo baxay oo dhan qiimaha our gaar ah iyo bilaabaan qorshaynta quudhin soo socda. Waxaa jira badan oo qiimaha laga dhimay la heli karo oo dhan shabakadaha tareenka kala duwan oo Yurub ah. Make sure to keep a lookout for the latest discounts by following our facebook iyo twitter pages too.
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, ka dibna riix halkan: http://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/interrailing-tips/ - (hoos u riixdaa si aad u aragto Code Cudarada ah)
Haddii aad rabto in aad noqon nooca in dadka isticmaala aad, si toos ah aad ku hanuunin karaa bogagga raadinta our. In link this, waxaad ka heli doontaa our jidadka tareenka ugu caansan – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside aad xiriir la leeyihiin bogag ku degtey Ingiriisi our, laakiin waxaan sidoo kale leeyihiin https://www.saveatrain.com/ru_routes_sitemap.xml, oo waxaad bedeli kartaa / ru si / de ama / PL iyo luuqado badan.
London tareen safarka travelamsterdam travelparis